Waalka waraabka yar - PUMA
Isku xiraha tayada sare leh ee loo adeegsaday codsiyada beeraha si loo hubiyo socodka biyaha ee ka imanaya PE tuubada weyn ilaa dhibcaha dhuuban ee khafiifka ah. Xadhigga cinjirka ayaa loo baahan yahay si loogu xidho tuubbada weyn. Xidhiidhka la leh dripline-ka waxaa sameeya lowska. Xiriirka waalka awgiis, socodka biyaha waa la xiri karaa ama lagu hagaajin karaa qaddarka la doonayo.
Goobta Asalka: Hebei, Shiinaha
Magaca Brand: Meelaha cagaaran
Codsiga: Guud, Waraabka Beeraha
Isticmaalka: Nidaamka Waraabka Keydinta Biyaha
Teknolojiyada: Teknolojiyada Keydinta Biyaha
Dekedda: Tianjin, Shiinaha
Midabka: Madow / Buluug
Cabir: 16mm / 20mm
16mm / 20mm faleebo cajalad faleebo
Faleebada faleebada faleebada ayaa isku xiraya walxaha loo isticmaalo nidaamyada waraabka marka la rakibayo cajaladaha faleebada khafiifka ah.
Waxaa loo isticmaalaa inay ku xirmaan cajaladda faleebada tuubada PE ee biyaha siisa berrinka.
Xidhiidhiyayaasha leh dhexroor 16 mm ah ayaa ku habboon isku xidhka cajaladaha faleebada oo dhererkoodu dhererkoodu gaadhayo 200 m, oo waalka ayaa u oggolaanaya xidhitaanka firfircoon ee qaybta iyadoon loo baahnayn in la xidho waraabka oo dhan.
Maaddada ay ka samaysan yihiin waxay u adkaysataa heerkulka daran iyo shucaaca UV.
Isku xirayaashaani waa kuwo aan looga maarmin dhismaha nidaamyada waraabka iyadoo la adeegsanayo cajalado faleebo ah.
Qaababkooda ayaa la waafajiyay oo waxay la mid yihiin cajalado faleebo ah oo khafiif ah oo suuqa ku yaal.
Xullo badan oo qalabkan ah ayaa u oggolaanaya isticmaalkooda qaabab isku xirnaanta kala duwan (oo leh tuubbo, dun leh, cajalad kale).
1. Jawaab deg deg ah, hufan, iyo mid xirfadeedba 24 saac gudahood, 14 saacadood oo adeegyo qadka ah.
2. 10 sano oo khibrad wax soo saar ah oo dhinaca beeraha ah.
3. Taageero farsamo iyo xalka injineerka sare.
4. Nidaamka xakamaynta tayada adag & kooxda, sumcad sare ku leh suuqa.
5. Agabyo kaladuwan oo waraab ah oo xulasho ah.
6. Adeegyada OEM / ODM.
7. Aqbal amarka muunada kahor Amarka Mass.
Hore: Naxaasta nozzles waxay wax yeeleysaa rusheeyaha
Xiga: Rakibidda Waraabka- Taxanaha Beerta 17MM (POM)
1. Ma waxaad tahay shirkad wax soo saar ama ganacsi?
Waxaan nahay soo saare caan ah oo nidaamyada waraabka ee adduunka in ka badan 10 sano oo khibrad warshadeed ah.
2. Ma bixisaa adeegga OEM?
Haa. Alaabtayada oo ku saleysan BrandPlains Brand. Waxaan bixinaa adeegga OEM, oo isku tayo ah. Kooxdayada R&D waxay qaabeyn doonaan badeecada iyadoo loo eegayo shuruudaha macaamiisha.
3. waa maxay MOQ-daadu?
Badeecad kastaa waxay leedahay MOQ kala duwan ， Fadlan la xiriir iibka
4. Waa maxay goobta shirkadaadu?
Waxay ku taal Langfang, HEBEI, CHINA. Waxay ku qaadataa 2 saacadood Tianjin ilaa shirkadeena gaari.
5. Sidee loo helaa tijaabada?
Waxaan tijaabada kuugu soo diri doonnaa bilaash oo xamuulka ayaa la qaadayaa.
Anti-daadinta Mini Madax
Waraabka Mini Madax
Mini Madax Baran
Mini Madax Alwaax loogu talagalay Tape
Mini Madax for Layflat
Mini Madax Waayo, Pe
Mini Valve Offtake oo leh gasket
Waraabka mini waalka- LION
Rakibidda Waraabka- Taxanaha Beerta 17MM (POM)
Isku xidhka microtube